umgangatho womoya wasendlini - Beijing Holtop Air ongenisa Co., Ltd.
Yintoni na le mishini Air Quality?
"Umgangatho esendlwini umoya," okanye IAQ, i isihloko esitsha e-ukhuseleko lokusingqongileyo. Nangona eninzi ingqalelo lufakwe ungcoliseko yangaphandle kule minyaka imbalwa idlulileyo, kugxininiswa kumgangatho womoya endlwini iqala nje. Umgangatho womoya ikhaya xa ikakhulu inento yokwenza imali ezingcolisayo ngaphakathi, kodwa kwakhona ezimiselwe ukufuma komoya amanqanaba. I-US Agency Protection Environmental uye wafumanisa ukuba lamanani zingcolisi ungaba kuze kube 100 ngaphezulu ngaphakathi kwe phandle. I-American Lung Association iqikelela ukuba abantu abaninzi bachitha-90% yexesha kwabo endlwini, umoya ococekileyo ngoko endlwini kubaluleke kakhulu.
Yintoni ebangela ukungcoliseka komoya endlwini?
Ngokutsho kwe US ​​Environmental Protection Agency, izinto ngaphakathi ikhaya ukuba ndinikhululele gesi nobangela uphambili iingxaki lomoya lwasezindlwini. Olu luhlu luquka i onekhaphethi, ifenitshala upholstered, izixhobo zegesi, iipeyinti kunye izinyibilikisi, iimveliso zokucoca, Izihlaziyi umoya, impahla owomileyo-ukuwuhlamba zinambuzane. Ukuba unayo i igaraji eqhotyoshelweyo, imisi evela ipetroli, i-oyile kunye zinendlela emotweni wakho ukufumana indlela yabo nomoya ekhayeni lakho. imichiza eyonakalisayo nazo evela umsi wecuba kunye woodstoves.
umoya Ukunqongophala, kungaba kubi ingxaki kuba ezingcolisa imenu yentsingiselo ngaphakathi. Angenziwa uphawu amakhaya kakuhle zigqunyiwe ukugcina ngaphandle umoya nentlahla ngaphandle, nto leyo yaze yangxenga ifuthe lomanyano zingcolisi. lobushushu nokufuma High amanqanaba nazo kwandisa lamanani ezinye izinto ezingcolisa indalo.
Yintoni le mveliso arcade games lomoya endlwini?
Abaninzi ubugcisa ezikhoyo namhlanje ekulweni kuphela iiklasi enye okanye ezimbini ezingcolisa umoya. Holtop fresh ERV inkqubo air zokuhlanjululwa yenzelwe ukuba kuliwe zonke ezintathu umoya ngokuhlanjululwa olubanzi. Inokukuzisela kuphela umoya ococekileyo entsha ukuya ngaphakathi, tyhala waphuma umoya esidala, kodwa ukunciphisa umoya iindleko xa ibaleka inkqubo eyi emoyeni.
Njani Ndazi apho endlwini umgangatho womoya imveliso undifanele?
Ungaqhagamshelana Holtop Iqela yokuthengisa ukufumana imveliso egqwesileyo wena kunye nosapho lwakho. Iziphumo zisekelwe phezu lwezinto bachonge njengoko iingxaki ekhayeni lakho. Ungaqhagamshelana umthengisi HOLTOP yakho yengingqi ukuba ukuvavanya ikhaya lakho kunye nenkqubo nentuthuzelo endlwini.
Ndingenza ntoni ngokwam ukuba ukuphucula umgangatho womoya ikhaya lam?
Kukho amanyathelo aliqela mihla onokuzenza ukucutha zingcolisayo ajikeleza umoya ekhayeni lakho, kubandakanywa:
izicoci bawagcine, izinyibilikisi ipeyinti imveliso yemichiza kwimigqomo Zivalwé ngetywina. Ukuba kunokwenzeka, ukubagcina phandle.
Ezicocekileyo zidle ubuncinane kanye ngeveki.
Ndizihlamba rhoqo nezokulala kunye zokudlala eyimitha.
Gcina iifestile zivaliwe xa umungu, ungcoliseko kunye namanqanaba ukufuma ziphezulu.
Cela umthengisi HOLTOP yakho yengingqi ukuba ahlole aze ukucoca inkqubo ukufudumeza nokupholisa kwikhaya lakho.
Qiniseka ikhaya lakho inomoya ngokufanelekileyo. (Amakhaya Modern zigqunyiwe, atywinwe onge amandla, nto leyo ithetha ezingcolisa indalo emoyeni akukho ndlela ukubaleka).
Gcina amanqanaba ukufuma ngaphakathi esempilweni, uluhlu ukhululekile ukuthintela sande nangesihumba (30% - 60%).
Kuphephe ukusebenzisa phunga zokuqhola kunye Izihlaziyi air ivumba-yokugquma, leyo kunokubangela amachiza ayityhefu.
Khetha iimpahla kukhutshwe imali incinane kangangoko of umphunga imichiza.
Musa ukuvumela ukutshaya ngaphakathi ekhayeni lakho uze uqinisekise zonke izixhobo zegesi ziye kungena ngokufanelekileyo.